Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1553
Fanabeazana mampiaty : hampiarahana mianatra ny sembana sy ny mpianatra tsotra
Miara-miasa nanomboka omaly, ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Handicap International hampiditra ny ankizy rehetra voailika amin’ny rafi-panabeazana omen’ny minisitera. Fanabeazana mampiaty ny iantsoana azy ary tsy tokony hisy ankizy voailika intsony fa ho tafiditra an-dakilasy avokoa. Ao anatin’izany ny ankizy voafonja, kamboty, manana fahasembanana samihafa… « Misy ny rafitra hapetraka hanatanterahana ny asa manomboka eny amin’ny […]
Hahatsiaro an-dRanavalona III ny Zaikabe Merina
Manomana hetsika eny Manjakamiadana ny Zaikabe Merina, tarihin’Andrianarivo Jonah, ho fanamarihana ny faha-27 febroary taona 1897, alina nanonganan’ny mpanani-bohitra ny mpanjaka Merina farany, ary ny 28 febroary, andro nandefasany azy sesitany mandra-pahafatiny. “Haranty amin’izany ny tantaran’ny mpanjaka Ranavalona III, manomboka ny 26, 27, ary 28 febroary izao”, hoy izy. Hisy boky volamena hanehoana hevitra momba […]
Tolo-tanana : nahangona 10 tapitrisa Ar Atsimo Andrefana
Vola 10 020 990 Ar ny voaangona nandritra ny “Tolo-tanana ho an’Androy” natao teto Toliara tao anatin’ny telo andro. Nanampy ireo ny vary 60 gony, tsako dimy gony, sira 31 gony, voamaina 32 gony, siramamy iray gony lasaka, lamba fitafy 59 fonosana ary lay efatra fonosana lehibe… Araka ny fanambaran’ny lehiben’ny faritra, havadika ho sakafo ireo vola […]
Noho ny fifindra-monina sy ny kere : mitombo 50 isan’andro ny mponina ao Toliara
Vokatry ny hamafin’ny kere any atsimon’ny Nosy. Mifindra monina mamonjy tanàn-dehibe avokoa ireo afaka manao izany. Ao Toliara, tafakatra 50 isan’andro ireo tonga mifindra monina. Mitombo 50 isan’andro ny mponina eto Toliara vokatry ny fifindra-monina noho ny fisian’ny kere aty atsimo. Miezaka mamaha ny olany ny olona tsirairay izay manana fahefana manafatra ny havany tratry […]
English Microscholarships A.P : mpianatra 57 mahafehy ny teny anglisy
Nahavita ny fianarana teny anglisy ireo mpianatra 57 avy amin’ny fianakaviana tena sahirana. Tamin’ny alalan’ny fandaharanasa fizarana vatsi-pianarana momba ny fampianarana teny anglisy na English Microscholarships ataon’ny masoivoho amerikanina no nahafahan’izy ireo nanao izany fampianarana izany. Notolorana ny marim-pahahaizana manokana ireto mpianatra 57 ireto tamin’ny herinandro teo. Notronin’ny masoivoho amerikanina Robert Yamate sy ny sekretera jeneralin’ny […]
Manjaka tokana ny antokon’ny fitondrana. Zava-dehibe ny fisian’ny hevitra samy hafa, raha ny fijerin’ny eo anivon’ny KMF/Cnoe. “Tsy tokony hatao tsinontsinona ny fifandanjan-kery. Satria zava-dehibe ny fisian’ny hevitra maro samihafa, indrindra ny hevitry ny vitsy anisa eo amin’ny fampandrosoana.” Io ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe, Raharisoamalala Patricia, teny Antanimena, afakomaly, momba ny fanjakan’ny antoko […]
Fiahiana ara-tsosialy : nanampy ny kamboty sy ireo zaza nania ny Freedom
Tsy any amin’ny resaka politika ihany. Nanao fitsidihana sy fanomezana fitaovam-pianarana toy ny penina, kahie, solaitra ho an’ireo zaza kamboty sy nania, miisa 300, tezain’ny fikambanana Fiankinantsoa etsy Ankorondrano Andranomahery ny antoko Freedom, omaly. Tsy hijanona eo ihany anefa izany, araka ny nambaran’ny filohany, Rakotondrazafy Lalatiana. « Mampanantena izahay fa mbola hanohy fanampiana maharitra ary hanorina […]
Fikaroham-bahaolana : hampiditra ny FFKM amin’ny fampihavanana ny FFM
Tombanana fa mety hiara-kiasa ? Nambaran’ny loharanom-baovao eo anivon’ny FFKM, afakomaly, fa anisan’ny noraisina sy nampidirina ao amin’ny volavolan-dalàna momba ny fampihavanam-pirenena ny fehinkevitry ny fihaonambem-pirenena, natao teny Ivato tamin’ny taon-dasa. Efa nanambara ny tokony hidiran’ny FFKM ho anisan’ny mpikambana eo anivon’ny FFM ireo komity teknika mpamolavola izany lalàna izany. Na izany aza, andrasana ny mety […]
« Précédent 1 … 1 551 1 552 1 553 1 554 1 555 … 1 596 Suivant »